Xaaladda murugada badan ee tahriibayaasha dalka Libiya – Kasmo Newspaper
Xaaladda murugada badan ee tahriibayaasha dalka Libiya
Updated - February 20, 2017 9:53 pm GMT
Dalka Libiya wuxuu muddooyinkii dambe oo idil noqday barta khasabka ah ee dadka tahriibaya uga gudbaan dhanka Yurub, gaar ahaan markii uu xirmay dariiqii dalalka “Balcan”-ka. Waxaana xilligaan ku sugan dad lagu qiyaasay 270,000 oo u badan dadka ka soo cararay xasillooni darrada iyo gaajada ka taagan Woqooyiga iyo Afrikada Saxaraha ka hooseysa.
Wararka iyo macluumaadka ay helayaan Ururka Muhaajiriinta Caalamiga IMO iyo Xarumaha lagu qaabbilo soo-galootiga ayaa ah kuwo si aad ah looga naxo.
Dilalka, kufsiga iyo jirdilka, oo ka mid ah nolol-maalmeedka dalkaas nidaam la’aanta ah, waxaa ka sheekeynaya dhibbanayaashii ka soo samata baxay ee soo gaaray Xarumaha Yurub. Burris lagala dhaco anqawyada, bac “Plastic” ah oo lagu gubo dusha oogadooda oo qaawan iyo kufsi baahsan.
Dhallinyaro saf ku jirta iyaga oo gacmahooda saaray madaxa dushiisa oo loo dhibaataynayo oo qur ah rajadoodii ahayd in ay gaaraan mustaqbal wanaagsan oo nololeed. Laakiin ugu dhimanaya silic xeryo ay maamulaan arxan-laawayaal qowlaysato ah oo loo yaqaanno “Ma-gafe”, meydkoodana an dib loo arkin, laguna hilmaamo bacaadka dhulkaas sharci la’aanta ah hoostiisa.
Xaaladda dhabta ah ee ka jirta Libiya waa sheeko an waxba ka duwananayn wixii dhici jiray qarniyaal hore, xilligii ganacsiga addoonsiga, dhallinyaro wiilal iyo gabdho leh oo si arxan darro ah loo garaacayo.
Intooda badan waxaa lagu haystaa bilooyin, ilaa inta eheladooda uga soo dirayaan lacago baad ah oo madax furasho ah oo gaaraya ilaa $7,000 oo Dollar qofkiiba.
Dadaallo fara badan oo la sameeyay, si loo joojiyo geerida tirada badan ee badaha, waxaa u dambeeyay heshiis 3 sano soconaya oo 2dii Febraayo dhex maray Talyaniga iyo Xukuumadda uu hoggaamiyo Mustafa Serraj ee Libiya.
Toddobaadkii u dambeeyay Ilaalada Xeebaha Libiya waxay jidgooyo ku qabteen 1,131 qof oo tahriib ku jiray agagaarka xeebta magaalada Sabrata, laakiin tiro intaas ka badan ayaa ku geeriyootay Badda Dhexe (Mediterranean Sea).
Kumannaankaas tahriibaya ee maanta ku sugan dalkaas ma haytaan dariiq u furan oo noloshooda ay ku badbaadiyaan, mana jiraan cid kale oo ka fakaraysa oo an ka ahayn waalidiintoodii, waana xaalad u baahan in si degdeg ah wax looga baddelo.